Xariirika Jaceylka Farxada leh Waxaa Laga Helaa 5 Faa’iido oo Caafimaad ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Jacaylku waxa uu leeyahay saamayno togan amma taban oo dadku dhibaato iyo wanaagba kala kulmaan, taas oo faa’iidadiisu badan tahay, marka uu qofku helo qofkii uu hamigiisu ku taamaayey, isla markaana ay naftiisu u hilawday. Haddaba jacaylku waxa uu qofka ugu wanaagsan yahay sababahan soo socda:
Jacaylku wuxuu u wanaagsan yahay Dumarka, Balse Ragga wuu u daran yahay:-Jacaylku wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dumarka, waxaana sidaas daaha ka qaaday daraasada ay soo saareen mac-hadka English Longitudinal, kuwaas oo tilmaamay in haweenku markay aqalka leeyihiin, isla markaana jecel yihiin saygooda ay aad xaaladooda caafimaad iyo maskax ahaanba u degenaato, halka raggu badana markay jacaylka ku jiraan dhibaato aad u badan kala mutaan, taas oo fikir iyo walbahaar aad u badan ku abuurta.
Jacaylku wuxuu kor u qadaa caafimaadka maskax ahaaneed:- Jacaylku wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo jidh ahaaned, balse waxa dad badan aaminsan yihiin in ragga iyo haweenka jacaylku asiibaan waayaan caafimaadkooda
Haddaba, koox cilmi-baadhayaal ah oo ka socday jaamacadda Otago ee dalka New Zealand, ayaa baadhitaanay ku sameeyeen 1,000 qof, waxay ku oggaadeen dadka xidhiidhka jacayl amma jacaylku hayaa inay xagga maskaxda uga degen yihiin dadka hawl maalmeedkooda kale ku mashquulsan. Sidoo klae daraasado kale ayaa sidan si la mid ah tilmaamay in dadka xaaska leh amma jacaylku hayaa ka cadho iyo murugo yar yihiin dadka aan iyagu wax jacayli hayn.
Jacaylku wuxuu daawo u yahay wadnaha:- Dhawaan cilmi-baadhis ay soo saareen khubaro ka socotay jaamacadda Rochester ee magaalada New York ee dalka Maraykanka, ayaa tilmaamay in dadka jacaylka farxada leh ku nooli ka badbadaan qalliinada wadnaha iyo xannuunada asiiba wadnaha.
Cilmi-baadhayaashani, waxay sheegeen in xiriirka guur ee wanaagsani uu faa’iido u yahay wadnaha qofka, isla markaana hoos u dhigo dhiig karka, waxa sidoo kale arrintan mid la mid ah xaqiijiyey khubaro iyaguna ka socday jaamacadda Carolina oo daraasad ku sameeyey waxyaabo la xidhiidha bina’aadamka, waxaanay labadooduba heleen in qofka oo xaalad jacayl ku sugnaada uu ka hor tago subagowga ku yimaad wadnaha.